I-Northwest Haven - I-Airbnb
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Chrissy
U-Chrissy Ungumbungazi ovelele
Jabulela ukuhlala kwakho e-Cut Bank eNorthwest Haven. Imizuzu nje engama-45 ukusuka e-Glacier Park, leli khaya liyikhempu efanelekile yezivakashi ezidinga isikhala esincane sokuchayeka ngemuva kosuku lokuhlola ezintabeni. Uma uhlela ukuhlala eduze kwedolobha, uzozithola usebangeni elifushane kunoma yini oyidingayo. Uzojabulela ukuthula nokuthula ekupheleni komgwaqo. Sibheke ngabomvu ukukubamba!
Leli khaya linamakamelo okulala ama-3, namagumbi okugeza angu-2, indawo yokuhlala enethezekile, nekhishi eliphelele. Kungakhathaliseki ukuthi uhlela ukuhlala futhi uphumule, noma uphume uyofuna uhambo oluthile, uzozizwa usekhaya lapha. Sinikeza umbhede omkhulu ongu-1, umbhede ongu-1 wabantu ababili, kanye nemibhede eyi-twin bunk. Uma kudingeka indawo eyengeziwe yokulala, umbhede ungasetshenziselwa leyo njongo. Xhuma ama-akhawunti akho okusakaza-bukhoma ku-smart tv ukuze ungaphuthelwa yinoma yiziphi iziqephu zohlelo lwakho oluthandayo, noma ukhiphe ngokuphelele futhi ujabulele okubonwayo nemisindo yaseNyakatho-Central Montana.
UChrissy Ungumbungazi ovelele